ဖိုင်မန်နေဂျာ; လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာများ - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 01/06/2022 22:03 | applications များ
တစ်ခုချင်းစီကို ယနေ့ တည်ရှိနေသော လည်ပတ်မှုစနစ်များသည် သိုလှောင်မှု၏ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ဖိုင်စနစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။. Android ၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ storage folders များကိုရှာဖွေသည့်အခါတွင်၎င်းသည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာကို USB ကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်၎င်းကို PC နှင့်သာချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်လိုအပ်သောဖိုင်များကို စုစည်းပြီး လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
အခုတင်ထားတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ၊ ဖိုင်မန်နေဂျာက ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲ၊ ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးပါမယ်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် Android စက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကို အဓိကထားအာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တက်ဘလက်အများစုတွင် ဖိုင်မန်နေဂျာကို စံအဖြစ်ထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်၊ ယင်း၏အနုတ်လက္ခဏာမှာ ၎င်းတို့အများစုသည် များသောအားဖြင့် အခြေခံဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သောတစ်ခုလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များမှ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သိမ်းရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်၊ ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ကော်ပီကူးရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ပြဿနာမရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2 ပေါင်းစပ်ထားသော ဖိုင်မန်နေဂျာသည် ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
3 စံဖိုင်မန်နေဂျာ၏ အားနည်းချက်များ
4.1 Astro ဖိုင်မန်နေဂျာ
Android နှင့် အခြားမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအတွက် ဖိုင်မန်နေဂျာများသည် တူညီပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်၊ မတူညီသောဖိုင်များကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပြီး ဖိုင်များကို အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သိုလှောင်မှုတွင်ရှိသည်။
ကွန်ပျူတာများတွင်၊ ဤစီမံခန့်ခွဲသူအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သော်လည်း၊ မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ စသည်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ဖိုင်မန်နေဂျာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အမြဲတမ်းမလာပါ။
မတော်တဆဖြစ်ရင် သင့်စက်မှာ ပေါ်လာပါတယ်။ ဖိုင်စနစ် ထွက်လာပြီး လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲရန် အလားအလာ ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ်ထားသော ဖိုင်မန်နေဂျာသည် ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
ဆက်တင်များအက်ပ်အတွင်း သင့် Android စက်ပစ္စည်းတွင် လျှို့ဝှက်ဖိုင်မန်နေဂျာတစ်ခုရှိခြင်းသည် ကုမ္ပဏီသည် ဤအသုံးပြုသူများကို ဖိုင်စနစ်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ တားဆီးလိုကြောင်း အကြံပြုသည်။ ဒီအတိုင်းအတာကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ လုံခြုံရေး၊ သိမ်းဆည်းထားသော ဖိုင်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင့်စက်ပစ္စည်းမှ ၎င်းကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလိုပါက၊ ဆက်တင်များရွေးချယ်စရာကိုထည့်သွင်းရန်၊ ရှာဖွေပြီး "Memory နှင့် USB" ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် "Internal memory" သို့ဝင်ရောက်ကာ နောက်ဆုံးတွင် "Explore" ကိုနှိပ်ပါ။ ဟိုမှာ explorer ကိုဖွင့်ပါ၊ သင့်စက်၏အတွင်းမှတ်ဉာဏ်အတွင်းသိမ်းဆည်းထားသည့် folder အားလုံးကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဇယားကွက်၏ မြင်ကွင်း၊ အမည်၊ ရက်စွဲ သို့မဟုတ် အရွယ်အစားအလိုက် စီခြင်းတို့ကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး မန်နေဂျာတွင် ပြောကြားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို စတင်သောအခါတွင်ပင် ရှာဖွေမှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖိုင်တွဲများ၏ အကြောင်းအရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်အတွက် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုခုကို နှိပ်ရန်သာ လိုအပ်သည်။
ယခင်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဖိုင်မန်နေဂျာတစ်ခုတွင်ရှိသော မတူညီသောတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် သင်သည် ဖိုင်များကိုရွေးချယ်နိုင်၊ ၎င်းတို့ကိုဖျက်ပစ်ရန်၊ ၎င်းတို့အား မည်သည့်တည်နေရာသို့မဆို ကူးယူခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား အခြားအပလီကေးရှင်းများတွင် မျှဝေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါစာရင်းတွင်၊ စီးရီးတစ်ခုတွေ့လိမ့်မည်။ ဖိုင်မန်နေဂျာများစွာမျှဝေသော အနုတ်လက္ခဏာများ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဖွဲ့အစည်းနှင့် အသုံးပြုသူ၏ဦးတည်ချက်အတွက် ၎င်းတို့ကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စံဖိုင်မန်နေဂျာများ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖိုဒါတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ရွှေ့နိုင်စေရန် ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် မရှိပါ။ဖြစ်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကော်ပီကူးရန်ဖြစ်သည်။ ကော်ပီလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာမှာ မူရင်းဖိုင်တွဲတွင် တစ်ကြိမ်၊ ၎င်းကို နှစ်ကြိမ် ထားရှိခြင်းဖြင့် အချို့ဖိုင်ကို မိတ္တူပွားခြင်း၊ ဖျက်ပစ်ရမည့် ဖိုင်တွဲတွင် တစ်ကြိမ်၊ ရွေးချယ်ထားသော ဖိုင်တွဲတွင် နောက်တစ်ခု။
ဒုတိယ အားနည်းချက်ကတော့ အဲဒါပါပဲ။ ဖိုင်တွဲများ သို့မဟုတ် ဖိုင်များကို အမည်ပြောင်း၍မရပါ။မူရင်းအမည်များကို အပြည့်အစုံနှင့် အမြဲပြသထားသော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကွဲပြားမှုအတွက် ၎င်းတို့အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ခွင့်မပြုပါ။
ကိစ္စများစွာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဖိုင်တွဲအသစ်များကို ဖန်တီးမရနိုင်ပါ။ သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များ၏၊ သင်ဖန်တီးပြီးသားဖိုင်တွဲများကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ Dropbox၊ Drive သို့မဟုတ် အခြားအရာများတွင်ဖြစ်စေ cloud သို့အပ်လုဒ်လုပ်ထားသောဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းရန်စနစ်တစ်ခုရှိလျှင်ဤဖိုင်များနှင့်စက်ပစ္စည်း၏အတွင်းပိုင်းမမ်မိုရီများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်စနစ်အား စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စေရန်၊ ယခင်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်အတိုင်း အားနည်းချက်များစွာကို တင်ပြနိုင်သည့် စံမန်နေဂျာအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို ရယူရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ အကြံပြုထားသော ဖိုင်မန်နေဂျာများထဲမှ အချို့ကို အတိုချုံးရွေးချယ်ခြင်း။
သုံးစွဲသူများကြားတွင် ရေပန်းအစားဆုံး Application များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိုင်အားလုံးကို internal memory တွင်ရော SD ကတ်နှင့် cloud တွင်ပါ စုစည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူပြီး များပြားလှသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်။
အလွန်ရိုးရှင်းသောအင်တာဖေ့စ်နှင့်အတူ Google ဖိုင်မန်နေဂျာ။ မင်းခွင့်ပြုလိမ့်မယ်၊ သင့်စက်ပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် အကြောင်းအရာကို စီမံခန့်ခွဲပါ။သို့သော် ဖိုင်များ၏တည်နေရာအတိအကျကို သင်မသိနိုင်ပါ။ ဖိုင်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများကို ဖျက်ခြင်း၊ ဖိုင်များကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ၎င်းတို့ကို အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် မျှဝေခြင်းဖြင့်လည်း နေရာလွတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
၎င်း၏အမည်ဖော်ပြသကဲ့သို့, ဤလျှောက်လွှာ ၎င်းကို အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့် သိမ်းဆည်းစီမံရန် ရနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံးရှိသည်။. cloud သို့ အပ်လုဒ်လုပ်ထားသော သင်၏ဖိုင်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် လုံးဝအခမဲ့နှင့် အစွမ်းထက်သည့်ကိရိယာ။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဒီဇိုင်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသည့် Android မိုဘိုင်းလ်များတွင် တကယ့်ဂန္ထဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောခဲ့တဲ့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်၊ ဖိုဒါများ သို့မဟုတ် ဖိုင်အသစ်များ ဖန်တီးရန် သင့်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။. ဒါတွေအားလုံးအပြင် သူတို့ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အပြင် cloud မှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏ desktop ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရုံသာမက Android အသုံးပြုသူများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ဖိုင်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကိရိယာများ၏ ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းတွင် ဝင်းဒိုးနှစ်ခု၊ ရွေးချယ်မှု၊ အမည်ပြောင်းရွေးချယ်မှုများ၊ စာညှပ်များနှင့် အခြားအရာများစွာတွင် ဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုပါရှိသည်။
ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများဖြင့် သင်သည် သင်၏ဖိုင်များ၏အဖွဲ့အစည်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမက၊ ၎င်းတို့တစ်ခုစီ၏တည်နေရာကို နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အောက်ပါတို့ကို အမြဲပြောမည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင် ၎င်းသည် နည်းပါးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်ကြိုးစားခဲ့သည့် သီးခြားဖိုင်မန်နေဂျာကို သင်သိပြီး ရလဒ်ကောင်းများပေးသည်ဟု သင်ထင်ပါက ၎င်းကို မှတ်ချက်ဧရိယာတွင်ထားခဲ့ရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » applications များ » ဖိုင်မန်နေဂျာ; အဲဒါကဘာလဲ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အခြားရွေးချယ်စရာများ